Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Tabex - Sigaar cab sigaarka hadda!
Wax walba oo ku saabsan Tabex - Dhammaan daawooyinka dabiiciga ah ee kaa caawinaya inaad joojiso sigaar cabista
Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Tabex
In ka badan 50 sano Tabex wuxuu ka caawiyey malaayiin Yurubta Bari inay joojiyaan sigaar cabista habka nabad iyo dabiiciga ah. At acad fog 1865. Orehov wuxuu ogaaday oo uu falanqeeyay cytisine alkaloid ah oo kujira Qoyska Papilionaceae waana sheyga ugu weyn ee firfircoon ee Tabex®. Cytisine wuxuu ka tirsan yahay kooxda ka hortagga nikotiinka oo loo yaqaan ficil ahaan kiciyayaal neefsasho ah. Falanqaynta falanqaynta dawooyinka ee cytisine ee waaxda farmasiga ee Machadka Caafimaadka ee Sofia ayaa bilaabmay isla marka laga bilaabo 50-meeyadii qarnigii la soo dhaafay hadafkooduna wuxuu ahaa in loo abuuro foomka qiyaasta baahiyaha dib u soo nooleynta. Intii lagu guda jiray daraasado tijaabo ah oo ku saabsan bisadaha suuxdinta leh, laba takhtar caan ah oo reer Bulgaariya ah
Prof. Paskov iyo Dr. Dobrev waxay gaareen go'aan muhiim ah in sunta ay ka hooseyso nikotiinka iyo inta badan saameynta daciifka ah ee ay ku leedahay nidaamka wadnaha iyo cytisine loo isticmaali karo aaladda sigaar joojinta maxaa yeelay waxay la macaamishaa isla dadka soo dhaweeya jirka la wada nikotiinka. Waxyaabaha xiisaha leh ee sheekadan ayaa ah in konton sano ka hor laba khubaro caan ah oo sigaar cabayaal ah ay gaareen fikradda cajiibka ah ee ah sida fursad loogu siin karo shakhsiyaadka ku tiirsan sigaarka si ay ugu maraan dhammaan xannuunka xannuunka 'abstinence syndrome', iyagoo la socda muddada joojinta sigaarka iyo isla waqtiga saxda si loo dareemo kicin, sida cytisine oo intaa sii dheer ayaa xaqiijisay saameynta caloosha iyo caloosha.
Sannadkii 1962-kii Bulgaria Prof. Isaev wuxuu cytisine ka soocay geed leh silsilad silsilad dahab ah wuxuuna bilaabay cilmi-baaris deg-deg ah oo ku saabsan abuuritaanka alaabtii ugu horreysay ee caafimaad ee Tabex®. Daraasado caafimaad oo waaweyn oo ka dhacay Bulgaria, Jarmalka iyo Poland ayaa raacay taas oo xaqiijisay waxtarka iyo inta badan dhammaanba baahida loo qabo dabeecad qumman ee dadaallada joojinta. Waa la ogyahay in niyadda iyo xanaaqa xannuunku ay yihiin xaalado maskaxeed, oo lasocda qaar ku tiirsanaanta, oo ay adagtahay in laga gudbo. Daraasada caafimaad ee lagu sameeyay Bulgaria iyo dibada waxay xaqiijisay faa iidadan Tabex.
Sidee Tabex ugu shaqeeyaa gudaha maskaxdaada? Sida loo isticmaalo Tabex Daraasado caafimaad oo ku saabsan Tabex Ku saabsan Geedka Laburnum